Fizahan-tany any Hawaii amin'ny làlana vaovao: Malama ho an'ny vahoaka | Hawaii Travel News
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Tsindrio raha hihaino rakipeo Podcast eTN bebe kokoa • Vaovao momba ny dia an-kolontsaina • Raharaham-panjakana • Hawaii Travel News • Other • Olona manao vaovao • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • News News
Fizahan-tany any Hawaii amin'ny làlana vaovao: Malama ho an'ny vahoaka
voatifitra sary 2020 11 17 ao amin'ny 11 18 12
Home » Lahatsoratra » Hawaii Travel News » Fizahan-tany any Hawaii amin'ny làlana vaovao: Malama ho an'ny vahoaka
Hawaii dia manandrana mametraka ny tenany ho toeran-kafa fitsidihana. Hawaii dia te hametraka soatoavina samihafa raha ny sehatry ny fizahantany no jerena. Ny fizahan-tany faobe dia mety ho olana taloha. Nipoitra ara-dalàna vaovao ho an'ny fizahan-tany Hawaii.
Ny fifaninanana dia hihalehibe eo anelanelan'ny toerana itodiana sy ao anatin'ny toerana itodiana. Ny fizahantany fizahan-tany ho an'ny toeran-kafa tsy manam-paharoa no mety ho lakilen'ny fahombiazana, araka ny foiben'i Hawaii Tambajotra fizahan-tany manerantany.
Misy làlana vaovao mitondra ny ho avin'ny fizahan-tany any Hawaii.
John de Fries, ny CEO vaovao an'ny Fahefana fizahan-tany any Hawaii, efa niasa tamin'ity lalana vaovao ity na dia talohan'ny naha-tompon'andraikitra ny indostria lehibe indrindra an'ny Aloha Fanjakana sy alohan'ny hamelezana ny Coronavirus.
Nanazava ny asany i Andriamatoa de Fries tamin'ny fametrahana an'i Hawaii amin'ny làlana mankamin'ny fizahan-tany tompon'andraikitra amin'ny taona 2019. Ny fanjakana dia nandray an-tanana mpitsidika 10,400,000+ isan-taona any amoron-tsiraka. De Fries dia nilaza fa ity fahombiazana ity dia nisy sarany tokony aloa.
Ankehitriny miaraka amin'ny zava-misy COVID-19, toekarena fizahan-tany any amin'ny freefall, ary rafitra ara-pahasalamana atahorana, ny tanjona ho an'ny fizahan-tany dia mila averina mamaritra.
Nanazava i De Fries: “Ireo nosy Hawaii dia lova tsy azo soloina ho an'ny mponin'i Hawai'i sy ireo mpitsidika azy marobe. Andraikitry ny tsirairay ny mitandrina ny loharanon-karena voajanahary sy kolontsaintsika manomboka amin'ny mauka ka hatramin'ny makai (tendrombohitra ka hatramin'ny ranomasina).
Ny teny Hawaii midika midika hoe "hikarakara" ary aina dia midika hoe tany. Tandremo tsara ny tany. Aza manary fako, manangona fako, manodina. Fototra izany ary tokony ho voajanahary. fa trowel tsy natao ho an'ny tany fotsiny; natao ho an'ny vahoaka izany.
Omaly i John de Fries dia nanatona ny vondrom-piarahamonina tao Hawaii Island mba handray hevitra momba ny fomba famerenana handefa indray ny fizahantany any amin'ny Nosy Lehibe.
Nanazava Andriamatoa de Fries fa zava-dehibe ny fametrahana fitsipiky ny fandaminana ho an'i Malama, izay ahafahan'ny fitarihan'ny soatoavina.
Ny fifanakalozan-kevitra dia ny famoahana ny tombony ho an'ireo vondrom-piarahamonina ao Hawaii Island ho an'ny soso-kevitra sy tolo-kevitra.
Tale jeneralin'ny HTA John De Fries
Nasongadin'Andriamatoa de Fries: "Malama dia manana hetsika, fomba fanao eo amin'ny samy kolontsaina, ny recourses voajanahary, isaky ny fifaneraserana, fitsipika iray hampivondronana antsika rehetra na inona na inona sehatra iainantsika."
Nanome sosokevitra ny mpitarika ny vondrom-piarahamonina fa tokony angatahin'ireo mpizahatany ny hanao antoka amin'i Malama alohan'ny hamelana azy ireo ao amin'ilay nosy.
Andriamatoa de Fries dia nanolotra ny heviny momba ny fampiharana ny Malama Hawaii mba hiantohana ny fomba fiasa tompon'andraikitra amin'ny fizahan-tany Hawaii izay ahitan'ny taranaka 3 na 4 manaraka loharano voajanahary ao Hawaii na amin'ny endrika tsara kokoa noho ny ankehitriny aza.
Henoy ity fifanakalozan-kevitra mahaliana ataon'ny mpitondra fizahan-tany sy ny fiaraha-monina ity.